मधेस झरेका पूर्वराजालाई मधेसी जनताद्वारा भव्य स्वागत ! सीके राउतलाई तनाव – sagunkhabar.com
सिके राउतको मूलप्रवाहीकरण कि शक्ति सञ्चयको रणनीति भन्ने बहस काठमाडौंमा चलिरहेका बेला हामी उनको आधार क्षेत्रमा पुग्दा फरक विश्लेषण सुनियो । कम्तिमा पनि अलग मधेसको अभियानबाट राउत बाहिरिएकाले मधेसले राहत महसुस गरेको धेरै बुझाइ पाइयो।
सीके राउत काठमाडौंबाट आएदेखि जनकपुरबाट बाहिरिएका छैनन् । उनका समर्थकहरुमाथि प्रदेश सरकारले पनि निगरानी गरिरहेको छ ।सिके राउतलाई संघीय सरकारले हैसियतभन्दा बढी महत्व दिएकोमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यदि संघीय सरकारसँगको सम्झौता विपरीतका गतिविधिहरु एयरपोर्टमा जस्तै फेरि दोहोरिएमा प्रदेश सरकारले नसहने यादवले प्रष्ट पारे।
सिके राउतका धेरैजसो पुराना फोटो र भिडियोहरु अहिले भाइरल बनेको प्रदेश मन्त्री यादवको बुझाइ छ । जनकपुरको होटल सीताशरणमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘काठमाडौं र अन्यत्र सिके राउतले अब मधेसमा के के न गर्न लाग्यो भन्ने आतंक देखिन्छ। तर, यहाँ उनको कुनै गतिविधि छैन । संविधान, कानुन तथा सरकारसँगको सहमति विपरीत कुनै गतिविधि गरेमा हामी छाड्दैनौं ।’
हवाइमार्ग वा स्थलमार्गबाट जनकपुर प्रवेश गर्नासाथ सिके राउत होइन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहका बारेमा चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ। ढल्केबर र महेन्द्रनगरबाट जनकपुर प्रवेश गर्ने ठाउँ–ठाउँमा पूर्वराजाको जयजयकार गर्दै ब्यानर तथा होर्डिङबोर्ड लगाइएका छन् ।
जनकपुर एयरपोर्टदेखि बसपार्कसम्म आउँदा रिक्सा चालक परमेश्वर साहले ‘राजा आउन लागेको’ र उनले हिन्दू धर्मका कुरा गर्ने सुनेको बताए । (अनलाइन खबर)
विप्लव प्रतिवन्धले नेकपामा भूकम्प ! सल्लाह नगरी निर्णय गरेपछि प्रचण्ड लगायतको छुट्टै बैठक